Inona no azontsika atao amin'ny seranan-tsambo USB-C an'ny iPad Pro 2018 | Vaovao IPhone
Inona no azontsika atao amin'ny seranana USB-C an'ny iPad Pro 2018 vaovao
Ignacio Sala | | iPad Pro, About us
Herinandro vitsivitsy lasa izay dia nanolotra ofisialy ny momba azy ny zazalahy Cupertino ny taranaka vaovao an'ny iPad Pro, taranaka vaovao manolotra antsika ho manintona azy lehibe indrindra ny fiovan'ny fifandraisana amin'ny tselatra mankany USB-C, ka manokatra ny isan'ny fahafaha-natolotry ny fitaovana antsika tamin'ny voalohany tsy mampiasa adaptatera.
Hatramin'ny saika ny taranaka voalohany an'ny iPad, raha mbola namakivaky ilay boaty izahay dia afaka nampifandray izay karazana fitaovana amin'ny iPad, saingy noho ny fahatongavan'ny fifandraisana USB-C dia lasa ampahany amin'ny tantara farany indrindra ireo kojakoja lafo vidy ireo. an'i Manzana. Raha mbola tsy mazava ianao, Karazana fitaovana inona no azontsika ampifandraisina amin'ny iPad Pro misy fifandraisana USB-C, avy eo izahay dia mamoaka anao amin'ny fisalasalana.
1 USB-C amin'ny iPad Pro
1.1 Ampianaro ny iPad Pro
1.2 Ampidino ny fitaovana hafa
1.3 Mifandraisa amin'ny fampisehoana ivelany
1.4 Mifandraisa amin'ny solosaina
1.5 Mampifandray fitaovana hafa
1.6 Play audio ary mamorona atiny
2 Ny ho avy dia ny fifandraisana USB-C
USB-C amin'ny iPad Pro
Ny fifandraisana USB-C an'ny iPad Pro dia mitovy amin'ny fifandraisan'ny tselatra, saingy tsy mampiasa adaptatera, adaptatera izay tsy maintsy neken'ny Apple teo aloha mba hahazoana mari-pankasitrahana MFI ary hahafahana mampiditra ny chip enkripsi mifandraika aminy, chip iray izay manampy amin'ny vidiny avo lenta kokoa amin'ireo fitaovana ireo.
Ny fifandraisana USB-C dia efa noraisina haingana tao anatin'ny roa taona lasa izay ny ankamaroan'ny mpanamboatra fitaovana. Noho ny fahatongavan'ny fifandraisana USB-C ary araka ny filazan'ny Apple ao amin'ny tranonkalany, ity seranan-tsambo an'ny iPad Pro ity, tsy misy afa-tsy amin'ireo maodely 11 sy 12,9-inch 2018, afaka ahafahana:
Ampianaro ny iPad Pro
Ampidino ny fitaovana hafa
Ampifandraiso ireo fampisehoana ivelany.
Mifandraisa amin'ny solosaina
Mifandraisa amin'ireo fitaovana hafa
Play audio ary mamorona atiny
Ny iPad Pro vaovao dia avy am-pelatanana charger 18w misy fifandraisana USB-C, lojika, izay ahafahantsika mameno haingana kokoa ilay fitaovana noho ny tamin'ny maodely teo aloha.
Ho fanampin'ny iPhone, amin'ny alàlan'ny fifandraisana USB-C an'ny iPad Pro, koa afaka manafatra fitaovana hafa isika, fiasa mety indrindra rehefa ny iPhone, na maodely finday avo lenta, dia manana herin'ny bateria. Raha ny momba ny iPhone dia mila mahazo ny tariby tselatra (iPhone) mankany USB-C (iPad Pro) isika, tariby izay misy vidiny 25 euro ho an'ny maodely iray metatra y 39 euro ho an'ny maodely 2 metatra.
Afaka manao izany koa isika ampidiro ny Apple Watch, raha mbola miverina mijery sy mahazo ny mamehy tariby ho an'ity fitaovana ity miaraka amin'ny fifandraisana USB-C izay natombok'ilay orinasa monina ao Cupertino vao haingana ary Manana ny vidiny 35 euro.
Mifandraisa amin'ny fampisehoana ivelany
Raha mampifandray ny iPad Pro amin'ny efijery ivelany isika dia afaka mijery horonantsary amin'ny HDR10, milalao famelabelarana, manitsy antontan-taratasy amin'ny pejy, mankafy ny lalao ankafizinay ary maro hafa (saika mitovy amin'ny efa azontsika atao amin'ny tselatra mankany amin'ny adaptatera HDMI). Tadidio fa rehefa mampifandray ny iPad Pro amin'ny monitor, Tsy mandeha amin'ny fampisehoana faharoa izanyFa kosa, hita taratra ny atiny rehetra aseho eo amin'ny efijery iPad. Raha te hampiasa azy io ho efijery faharoa isika dia mila rindranasa mamela antsika hanao an'io asa io, zavatra izay tsy misy amin'izao fotoana izao.
Raha manana monitor miaraka amina fifandraisana USB-C / Thuderbolt ianao dia afaka mampifandray azy mivantana amin'ny alàlan'ny USB-C. Ny iPad Pro mampiasa ny protokol DisplyaPort hanohanana ny fifandraisana hatramin'ny vahaolana 5k. Aza adino fa ireo mpanara-maso amin'ny Thuderbolt 3, toy ny LG UltraFine 4k sy 5k dia tsy mifanaraka amin'ny iPad Pro. Raha te hampiasa tariby misy kalitao ianao dia manolotra anay i Apple ny taribinao manokana. Raha tafavoaka antsika ny vidiny, Belkin dia manolotra safidy mihoatra ny mahaliana antsika.
Azo atao koa ampifandraiso amin'ny iPad ny monitor iPad Pro, fa manana fetra izahay fa ny vahaolana farany ambony dia 4k amin'ny 60 Hz. Ankoatr'izay, mila mampiasa tariby HDMI 2.0 voamarina isika raha te hahazo ny faran'izay betsaka amin'izany. Ny IPad Pro dia tsy afaka mandefa feo Dolby Digital Plus amin'ny alalàn'ity karazana fifandraisana ity ihany fa tsy Dolby Atmos.
Tena hampifandray ny iPad Pro amin'ny solosaina ve isika? Raha mampifandray ny iPad Pro amin'ny solosaina isika, ankoatra ny fahafahantsika mavesatra miadana kokoa ny fitaovantsika, dia ho afaka hampifandray ny angon-drakitra ataontsika koa izahay ary hanao backup amin'ny alàlan'ny iTunes, raha mbola ampiasainao izany. Afaka mampiasa rindranasa toa ny iMazing koa izahay hizaha ny atin'ny fitaovantsika.
Raha tsy manana fitaovana misy fifandraisana USB-C isika, tsy maintsy hamakivaky ny fizahana indray isika hividianana tariby mifanaraka aminy, tariby izay an'ny ankizilahy Belkin dia manolotra anay amin'ny vidiny 29,99 Euro.
Mampifandray fitaovana hafa
Ho fanampin'ny solosaina sy mpanara-maso, ny fifandraisana USB-C an'ny iPad Pro dia ahafahantsika mampifandray fitaovana sy kojakoja marobe. Amin'izany no ahafahantsika mampifandray ny fakantsary nomerika na antsika mpamaky karatra hanafarana ireo sary amin'ny fitaovantsika na hampiasana azy ho toy ny console fampifangaroana. Ankoatr'izay, koa afaka mampifandray hubs, kitendry, fitaovana MIDI ary mikrô izahay ao anatin'izany ny fitaovana fitehirizana ivelany amin'ny fanafarana sary sy horonan-tsary, ary koa ny adaptatera Ethernet.
anefa iPad Pro dia tsy manana ny jack 3,5mm intsony, Adaptatera USB-C hatramin'ny 3,5mm an'i Apple (amidy misaraka amin'ny $ 9) eo ho eo aza mitsahatra mankafy headphones tariby amin'ny iPad Pro vaovao. Raha manana ny headphones misy mpampitohy USB-C ianao dia azonao ampiasaina amin'ny iPad Pro fa tsy mila adaptatera.
Azontsika atao koa ny mampiasa ny port USB-C mankany mampifandray kojakoja sy toeto-peo miaraka amin'ity karazana fifandraisana ity, ao anatin'izany ny interface audio sy ny fitaovana MIDI (MIDI dia matetika ampiasain'ny matihanina am-peo hampifandray amin'ny karazan-java-maneno elektronika, solosaina, ary fitaovana audio mifandraika).
Ny ho avy dia ny fifandraisana USB-C
Na dia mbola tsy te handray ny fifandraisana USB-C amin'ny iPhone aza i Apple, dia naseho indray izany ny antony tsy iza fa ny miziriziry te hampiasa tariby manana izay manome anay andiana fetrany izay efa resin'ny maro amin'ny fenitra USB-C vaovao.
Ny iPad dia efa ny fitaovana voalohany nampiasa ity teknolojia ity ao anatin'ny ecosystem mobile an'ny Apple. Manantena aho fa ny fitaovana manaraka dia ny iPhone, na dia heverintsika aza ny antony na antony manosika an'i Apple izay tsy tokony hataony, ary ny ankamaroantsika dia tsy eo am-pelatanana, ny fiovana andrasana dia mety tsy ho tonga mandritra ny taona vitsivitsy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPad Pro » Inona no azontsika atao amin'ny seranana USB-C an'ny iPad Pro 2018 vaovao
Fa maninona ianao no manana andriamby marobe amin'ny iPad Pro?
Ny app an'ny Apple's Clips dia nohavaozina ary nanampy fiasa vaovao marobe